Ergeyga gaarka ah ee Arrimaha Gurmadka Abaaraha oo soo saaray baaq ku aaddan Xaaladda Abaaraha ee Dalka – Radio Muqdisho
Ergeyga gaarka ah ee Arrimaha Gurmadka Abaaraha oo soo saaray baaq ku aaddan Xaaladda Abaaraha ee Dalka
Ergayga Gaarka ah ee Madaxweynaha JFS u Qaabilsan Arrimaha Beni-aadannimada iyo Gurmadka Abaaraha, wuxuu warbaahinta la wadaagayaa xaaladda halista ah ee abaaraha iyo arrimaha beni-aadannimada dalku marayo.
Ergeyga ayaa maalmihii ugu danbeeyay tan iyo markii la magacaabay ku howllanaa xog ururin iyo kulamo wada-tashi ah oo uu la yeelanayay hey’adaha kala duwan ee horay ugu lug lahaa arrimaha beni-aadamnimada, horumarinta iyo gurmadka abaaruha sida; Wasaaradaha dalka, hey’adaha dowliga iyo kuwa aan dowliga ahayn ee ka shaqeeya arrimaha musiibooyinka iyo gargaarka, xafiiska Qarmada Midoobay ee Muqdisho, safaaradaha deeq bixiyayaasha ah, ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Ujeeddada xog-ururinta horudhaca ah iyo kulamadaa ayaa ahayd in si hufan oo degdeg ah loola tacaalo saameynta abaaraha dalka oo iminka maraya xaalad laga naxo oo u baahan tallaabo deg deg ah.
Natiijooyinka horudhaca ah ee kasoo baxay kulamadaa iyo xog ururintaa waxaa kamid ah in:-
6.1 milyan oo qof oo Soomaali ah ay halis ku sugan yihiin
Wacyigelin la’aan baahsan ay ka dhex jirto bulshada
Gurmad iyo birmad degdeg oo loo baahan yahay
Deeqaha howlaha gargaarka dalka oo aad u ugu yar baahida jirta
Wadajir iyo wadashaqeyn dhanka siyaasadda ah in ay lagama maarmaan tahay.
Si wax looga qabto qodobada kore, waxaa degdeg loogu baahan yahay in baaqyo kala duwan loo gudbiyo deeq-bixiyeyaasha caalamiga ah iyo dawladaha Soomaaliya la saaxiibka ah, isla-markaana la fududeeyo qabashada howlaha hey’adaha kala duwan ee ka howl-gala arrimaha gargaarka, taas oo lagama maarmaaan u ah ka hortagga in abaartu ay macluul isku beddesho.
Ergaygu wuxuu bilaabayaa dhaqdhaqaayo ku aaddan u kuur galidda xaalada abaaraha iyo u qareemista kaalmada dhaqaale ee dibadda.
Ugu danbeyn, Soomaalidu waxa ay tiraahdaa biyo gacmahaaga ayaa looga dhergaa, kaalmada caalamka aan ka heli karno oo waqti qaadan karta waxaa ka dhow in dadka Soomaaliyeed oo dhaqan soo jireen ah u leh in ay is gacan qabtaan ay xilligan xasaasiga ah isku gurmadaan.
Marka aan innaga isku tashanno oo aan wadaagno inta aan haysanno ayay caalamka iyo dadka kalana na taakulayn karaan. Fadlan badaabi walaalkaa iyo walaashaa inta aan la bud-dhigin.
Guddoomiye Golaha Shacabka oo qaabilay Boqor Cusmaan Aw-Maxamuud
JAJ and Jubbaland Ministry of Information discuss speeding up consultations on draft media law